Job 15 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Okwu nke abụọ Elifaz kwuru (1-35)
O kwuru na Job anaghị atụ egwu Chineke (4)
O kwuru na Job dị mpako (7-9)
‘Chineke atụkwasịghị ndị nsọ ya obi’ (15)
‘Ọ bụ onye ajọ omume na-ata ahụhụ’ (20-24)
15 Elifaz+ onye Timan kwuru, sị: 2 “Onye ma ihe ọ̀ ga-ekwu ihe na-enweghị isi ma ọ sawa okwu,Ka ọ̀ ga-eme ka echiche ọjọọ* ju n’obi ya? 3 Ọ baghị uru iji okwu na-enweghị isi adọ mmadụ aka ná ntị,Ikwu naanị okwu abaghịkwa uru ọ bụla. 4 N’ihi na ị na-eme ka a ghara ịna-atụ egwu Chineke,Ị na-emekwa ka ndị ọzọ ghara ịna-atụgharị uche n’ihe gbasara Chineke. 5 N’ihi na ọ bụ mmehie gị mere i ji ekwu ihe ndị a,Ọ bụkwa okwu e ji aghọgbu mmadụ ka ị họọrọ ikwu. 6 Ọnụ gị na-ama gị ikpe, ọ bụghị m. Okwu ọnụ* gị na-agbagide gị akaebe.+ 7 Ọ̀ bụ gị bụ mmadụ mbụ a mụrụ,Ka è bu ụzọ mụọ gị tupu e kee ugwu? 8 Ị̀ na-anụ okwu Chineke na-ekwu na nzuzo,Ka ì chere na ọ bụ naanị gị ma ihe? 9 Gịnị ka ị ma anyị na-amaghị?+ Gịnị ka ị ghọtara anyị na-aghọtaghị? 10 E nwere ma ndị isi awọ́ ma ndị agadi n’ime anyị,+Bụ́ ndị tọkasịrị nna gị ahụ́. 11 Obi Chineke na-akasi gịMa ọ bụ okwu e ji nwayọọ gwa gị ó zughịrị gị? 12 Gịnị mere obi gị ji arafu gị? Gịnịkwa mere i ji na-achakasị anya n’iwe? 13 N’ihi na ọ bụ Chineke ka ị na-ewesa iwe,I kwekwara ka okwu ndị a si n’ọnụ gị na-apụta. 14 Gịnị ka mmadụ efu bụ nke mere aka ya ga-eji dị ọcha? Oleekwa otú onye ọ bụla nwaanyị mụrụ ga-esi bụrụ onye ezi omume?+ 15 Lee, ọ tụkwasịghị ndị nsọ ya obi,Eluigwe adịghịdị ọcha n’anya ya,+ 16 Ma ya fọdụzie mmadụ nke na-eme ihe rụrụ arụ, onye ọ kpọkwara asị,+Onye na-aṅụ ajọ omume ka mmiri. 17 M ga-agwa gị ya. Gee m ntị. M ga-akọ ihe m hụrụ, 18 Ihe ndị ma ihe kọrọ,+Ihe ndị nna ha kọọrọ ha, nke ha na-ezochighị ezochi. 19 Ọ bụ naanị ha ka e nyere ala,E nweghịkwa onye mbịarambịa batara n’ala ha. 20 Onye ajọ omume nke dị aka ike na-ata ahụhụ n’ụbọchị ndụ ya niile. Ọ na-ata ahụhụ n’afọ niile ọ nọ ndụ. 21 Ntị ya na-anụ ụda na-emenye ụjọ.+ N’oge udo, ndị na-ebukọrọ ihe mmadụ na-abịa na nke ya. 22 O kwetaghị na ya ga-esi n’ọchịchịrị pụta.+ Mma agha na-echere ya. 23 Ọ na-agagharị na-achọ nri,* na-asị: “Olee ebe ọ dị?” Ọ ma nke ọma na ụbọchị ọchịchịrị ga-agbachibido ya dị nso. 24 Ụjọ ga na-atụ ya n’ihi ahụhụ ọ na-ata na nsogbu ọ nọ na ya. Ahụhụ na nsogbu na-emesi ya ike otú eze nke jikeere ịlụ agha si emesi ndị iro ya ike. 25 N’ihi na ọ na-eweli aka ya ka ọ maa Chineke aka,Ọ na-achọkwa igosi na ọ ka Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ike. 26 O buuru nnukwu ọta ya siri ike,Mere isi ike gawa ka ọ maa ya aka. 27 Abụba juru ya ihu,Úkwù ya makwara abụba. 28 O bi n’obodo dị iche iche a ga-ebibi ebibi,N’ụlọ ndị a na-enweghị onye ga-ebi na ha,Bụ́ ndị ga-aghọ ikpo nkume. 29 Ọ gaghị aba ọgaranya. Akụ̀ ya agaghị ebukwu ibu,Ihe ndị o nwere agaghịkwa adịrị gawa. 30 Ọ gaghị esi n’ọchịchịrị pụta. Ire ọkụ ga-eme ka ome ya* kpọnwụọ,Ikuku nke si n’ọnụ Chineke* ga-eburu ya bufuo.+ 31 Ka ọ ghara iduhie onwe ya ma tụkwasị ihe na-abaghị uru obi,N’ihi na ihe ọ ga-enweta na ya agaghị aba uru. 32 Ihe a ga-eme ya n’oge na-adịghị anya. Alaka ya agaghịkwa ama pokopoko.+ 33 Ọ ga-adị ka osisi vaịn nke na-enwopụsị mkpụrụ ya na-achaghị acha,Dịkwa ka osisi oliv nke ifuru ya na-adapụsị. 34 N’ihi na ebe ndị na-anaghị asọpụrụ Chineke* na-ezukọ tọgbọ chakoo,+Ọkụ ga-erepịakwa ụlọikwuu ndị na-anara aka azụ.* 35 Ha na-akpa nkata ọjọọ n’obi ha nke na-eme ka ha na-eme ihe ọjọọ. Ihe ha na-eche mgbe niile bụ otú ha ga-esi aghọ aghụghọ.”
^ Na Hibru, “ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ.” Ifufe a na-ekpo ọkụ. Ọ na-esi n’ala ịkpa.
^ Na Hibru, “Egbugbere ọnụ.”
^ Ya bụ, olileanya ọ bụla o nwere na ihe ga-adịghachiri ya mma.
^ Na Hibru, “n’ọnụ ya.”